AJ McLean, Kevin Richardson, Nick Carter, Brian Littrell နဲ့ Howie Dorough စတဲ့ Backstreet Boys အဖွဲ့သား ၅ ယောက်တို့ဟာ ၂၀၁၉ နှစ်ဦးအစမှာ သူတို့ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စေခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တခြားကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
BSB အဖွဲ့ရယ်လို့ အတိုကောက်ခေါ်ကြတဲ့ Backstreet Boys အဖွဲ့ဟာ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တုန်းက သူတို့ချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် Album အသစ်လေးကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့တာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Album အသစ်လေးရဲ့ နာမည်ကတော့ DNA ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ Album အသစ်လေးဟာ ဂီတသက်တမ်း ၂၅ နှစ်ကျော်စပြုနေပြီဖြစ်တဲ့ BSB အဖွဲ့ရဲ့ ၉ ခုမြောက် Studio Album ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တကယ်တော့ BSB အဖွဲ့ဟာ Album အသစ်မထွက်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ သူတို့တွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ် အတောအတွင်းမှာလည်း Las Vegas မြို့ကြီးထဲမှာ Larger Than Life ဆိုတဲ့ နယ်လှည့်ဖျော်ဖြေပွဲတွေကို အများအပြား ကျင်းပနေခဲ့ရသေးတာမို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Our brand new album, DNA, is now available everywhere! BSB is in our DNA, just like it’s in all of yours. We have beenagroup for more than 25 years and this is our favorite album… ever. Listen, watch, share #BSBDNA ? https://t.co/VDPT1Nv7nc pic.twitter.com/STVfBtUlmC
အခု Album အသစ်အနေနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ DNA ထဲမှာ…
1 – Don’t Go Breaking My Heart
2 – Nobody Else
4 – New Love
6 – Is It Just Me
8 – No Place
9 – Chateau
10 – The Way It Was
11 – Just Like You Like It
စတဲ့ သီချင်းစုစုပေါင်း ၁၂ ပုဒ် ပါ၀င်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အဲဒီ ၁၂ ပုဒ်ထဲက ဦးဆောင်သီချင်းဖြစ်တဲ့ Don’t Go Breaking My Heart သီချင်းဟာ ၂၀၁၈၊ မေလ ၁၇ ရက်နေ့တုန်းက Single အနေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့ပြီးသား သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီသီချင်းဟာ အခုနှစ်ထဲမှာ ကျင်းပတော့မယ့် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲအတွက် Best Pop Duo/ Group ဆုနေရာမှာ ဇကာတင်စာရင်း ၀င်နေခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ၁၇ နှစ်တာ အတောအတွင်းမှာ BSB အဖွဲ့အတွက် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲ ဇကာတင်စာရင်းမှာ ပါ၀င်ခွင့် ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ် ဂရမ်မီဆုအတွက် ဇကာတင်စာရင်း ၀င်ခဲ့ရတာကတော့ ၂၀၀၂ တုန်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Shape of My Heart သီချင်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊
၁၉၉၆ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက သီချင်းချစ်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အခိုင်အမာ နေရာယူထားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ BSB အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ စီနီယာ၊ ဂျူနီယာနဲ့ တခြား ခေတ်ပြိုင် Boy Band တွေသာ အခြေအနေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ တစ်ကွဲတပြား ဖြစ်သွားခဲ့ကြရပေမယ့် သူတို့ကတော့ အခုထိတိုင်အောင် လက်တွဲညီညီ ရှိနေခဲ့ကြဆဲပါ။ သူတို့တွေဟာ အဲဒီလို ညီညွှတ်မှုနဲ့ပဲ ဂီတသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ အောင်မြင်တဲ့ သီချင်းတွေ အများအပြားကို ထွက်ရှိနိုင်ခဲ့ကြသလို MTV Music Award ဆု၊ Billboard Music Award ဆု စတာတွေအပြင် တခြားဆုတွေရဲ့ အရှင်သခင်တွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အခု နောက်ဆုံးထွက် Album အသစ်ဖြစ်တဲ့ DNA ဟာ ဆိုရင်လည်း လောလောဆယ်မှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ တခဲနက် အားပေးမှုကို ရရှိနေခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ။
Music Newsboy bandCelebrityMusic VideoNew ReleaseNomination Listplaylist
PREVIOUS POST Previous post: အသက် ၂၆ နှစ် ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ 2NE1 ရဲ့ အငယ်ဆုံးလေး Minzy
NEXT POST Next post: လီဆိုရာ ရဲ့ သီချင်းအသစ် Song Request